Qiimeyntan oo ay sameeyeen milatariga iyo saraakiisha ka hor-tagga argagixisada Mareykanka, ayaa ka duwan fikradaha dadka arrimahan fallanqeeya, waxayna imaneysaa ayada oo al-Shabaab ay awood milatari muujineysa toddobaadyadii tagey, kuwaasi oo ay tusaale u yihiin weeraro ka dhan ah ciidamada Amisom iyo kuwa Soomaalida.
Mid ka mid ah weeraradii ugu caansanaa ayaa ah mid dhacay sideeddii June oo lagu qaaday deegaanka Sanguni ee gobolka Jubbada Hoose.
Weerarkaas ayaa kooxdan xiriirka la leh Al-Qacida waxa ay ku ekeysay 800 oo askari oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan, ayna wehliyaan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka, oo hal askari looga dilay.
Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkii sideeddii June uu ahaa mid nasiib ugu fulay Shabaab.
Saraakiisha Mareykanka ayaa weli isku dayaya inay go’aamiyaan tirada ciidamada Al-Shabaab ee xilliga weerarka uu dhacay, hase yeeshee waxay rumeysan yihiin in kooxdan aysan helin awood dheeri ah.
“Waxa uu ahaa weerar nasiib ah” Waxaa sidaas VOA u sheegay sarkaal Mareykan ah oo codsaday inaan la magacaabin. “Uma arko weerarkaas mid si wanaagsan loo qorsheeyey” ayuu yiri.
Sarkaal kale ayaa sheegay in marka si kasta loo eego in weerarkaas uu lahaa astaamaha howlgallada Al-Shabaab.
“Taariikh ahaan, Al-Shabaab way dooneysay inay la dagaalanto ciidamo badan, ayada oo inta badan adeegsata xeelad yaab leh, oo aan horey loo aqoon, si ay sare ugu qaado fursadaheeda guusha” waxaa sidaas yiri taliye Desiree Frame, oo ah afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM.
“Waxaan filaynaa inaynu aragno dagaallo dheeri ah oo ka dhaca koonfurta Soomaaliya, ayada oo ciidamada Somalia, Amisom iyo kuwa saaxiibada leh, ay ku siqayan dhulka Al-Shabaab ay haysato”
Sidaas oo ay tahay, saraakiisha Soomaalida qaarkood ayaa tilmaamaya in ciidamada Al-Shabaab aysan wiiqin joogitaanka ciidamada gaarka ah ee Mareykanka, oo adeegsanaya baabuurta aanay xabaddu karin iyo diyaaradaha drones-ka ee aan duuliyaha lahayn.
“Waxay ogyihiin dhaq-dhaqaaqyadeena” Waxaa sidaas VOA u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaalida oo ku sugan Sanguni. “Waa sir la wada ogyahay” ayuu yiri.
Taliye kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in A-Shabaab ay ka faa’iideysatay xaaladda dhulka, ayna weerarka fulisay kadib daadad xooggan oo ciidamada Soomaalida, Kenya iyo kuwa Mareykanka ku qasbay inay dhufeysadooda ka sameystaan meelo muuqda.
Saraakiisha ka hor-tagga argagixisada iyo kuwa milatariga Mareykanka ayaa sheegay in shaki uusan ku jirin in Al-Shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga Soomaaliya. Hase yeeshee, waxay diideen in weerarada sii kordhaya ee Al-Shabaab ay u sababeeyaan wax ka baxsan ololahoodii ramadaanka.
“Uma aragno weerarada kordhay ee Al-Shabaab inay la macno tahay inay awooddooda korodhay ama u diyaar ahaanshahooda inay la dagaalamaan cadowgooda” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay AFRICOM.
Sarkaal sare oo ka hor-tagga aragagixsiada qaabilsan oo Mareykan ah ayaa dhaq-dhaqaaqyada Al-Shabaab ku qeexay kuwo iska joogto ah, isaga oo xusay hadlakii kooxdaas ee ahaa in la qaado oo la kordhiyo waxa ay ugu yeereen jihaadka, inta lagu guda jiro bisha Ramadan.
Si kastaba, qaar ka mid ah dadka taxliiliya arrimahan ayaa ka digay inay qalad tahay in la yareysto guulihii Al-Shabaab ay gaareysay tan iyo markii laga saaray magaaladii ugu dambeysay ee weyneyd oo ay haysteen ee Kismaayo, sanadii 2012.
“Waa ay caddahay in waxa aan aragnaa aysan ahayn kaliya weeraro kordhay oo la xiriira ololaha ramadaanka, balse kooxda inay sii xoogeysaneyso ayaa muuqata” waxaa sidaas yiri Daveed Gartenstein-Ross, oo ah fallanqeeye sare oo ka tirsan hay’adda difaaca dimqoraadiyadda.
Islamarkaana Gartenstein-Ross ayaa rumeysan in inkasta oo Al-Shabaab aysan lahayn awood ay ciidamada Mareykanka kula baranto gobolka, haddana ay muujisay inay u babac dhigi karto ciidamada Somalia iyo kuwa Amisom.
“Waxay awoodeen inay dilaan tiro badan, taasna ma ahan wax dhici jiray shan sano ka hor. Mararka qaar waxayba awoodeen inay dar-daraan saldhigyo dhan. Halista ayaa ah in ayada oo lasii dhimayo ciidamada Amisom, ay suurto-gal tahay in Al-Shabaab ay qabsato magaalooyin waa weyn. Waxaan u maleynaa waxaa jirta fursad wanaagsan oo ay taas ku dhici karto” ayuu yiri.
Waxaa warbixintan ka qeyb qaatay Haaruun Macruuf